Wednesday April 01, 2020 - 23:26:36 in Wararka by Liibaan Jeexoow
diyaaradaha Mareykanka ayaa shacab ku xasuuqaya Soomaaliya
Warbixinta oo soo baxday maanta oo Arbaca ah 1,April 2020 ayaa lagusoo gudbiyay caddeymo muujinaya in duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya badankood lagu beegsado dad shacab ah oo aan waxba galabsan.
Amnesty International waxay warbixinteedan cusub kusoo gudbisay laba duqeyn oo diyaaradaha Mareykanka ay bishii Febaraayo ee lasoo dhaafay ka geysteen gudaha iyo hareeraha degmada Jilib ee Jubbada dhexe.
Cabdullaahi Xasan oo kamid ah baarayaasha Hay'adda ayaa sheegay in baaritaan dheer ay ku ogaadeen in duqeymahan oo ahaa kuwa safmareen ah lagu dilay laguna dhaawacay dad shacab ah ayna been ahaayeen sheegashooyinkii ka yimid taliska AFRICOM ee ahaa in duqeymaha lagu dilay dagaalyahanno katirsan Al Shabaab.
"Africom waxay moodaa in ay dadka ka gadi karto in duqeyn walba oo soomaaliya ka dhacda ay ku disho dagaalyahanno Al Shabaab katirsan" ayaa lagu yiri warbixinta.
Amnesty International waxay warbixinteeda ku caddaysay in duqeyn ka dhacday degmada Jilib 2,Febaraayo 2010 lagu dilay gabar 18 sana jir ah oo lagu magacaabi jiray Nuurto Kuusoow Cumar, duqeyntu waxay dhacday xilli Nuurto iyo qoyskeeda ay cunteynayeen.
Duqeyntaas waxaa ku dhaacwamay laba canug oo Nuurto ladhashay iyo ayeeyadeed oo 70 sana jir ah, hay'adda ayaa wareysatay qaar kamid ah qoyska reerka laduqeeyay balse badbaaday waxayna uga warrameen wixii dhacay.
Max'med Cumar Abuukar oo ah wiil ay dhashay haweenayda da'da ah ee dhaawacantay ayaa sheegay in qoyska laduqeeyay uu xaalad shoog ah qaaday islamarkaana waxyeello weyn ay kasoo gaartay weerarka Mareykanka.
Sidoo kale warbixinta ayaa lagusoo qaatay duqeyn kale oo dhacday isla bishii Feberaayo ee lasoo dhaafay waxaana duqeyntaas lagu dilay Maxamuud Salaad Maxamuud oo ahaa 53 sana jir maamule ka ahaa xarunta shirkadda Isgaarsiinta Hormuud ee degmada Jilib.
Maxamuud ayaa aabe u ahaa 8 carruur ah xilligii laduqeynayay ayuu ku sugnaa beertiisa oo Muuz uu ugu tacbanaa meel 18 KM ujirta magaalada Jilib, taliska Africom oo wax laga weydiiyay duqeymaha Soomaaliya ka socda ee ay shacabka ku beegsanayaan ayaa isku difaacday in dhammaadka bisha April ee sanadkan ay soo saari doonaan warbixin ku saabsan eedaymaha loo jeediyay.
"Africom waxay umuuqataa in ay lasoo taagantahay Inkiraad duqeyn walba oo ay dad shacab ah ku dilaan" sidaas waxaa lagu yiri warbixinta hay'adda.
Sanaddii lasoo dhaafay ayay Amnesty International soo saartay warbixin xaqiijinaysa in Mareykanku 14 qof rayid ah ku dilay duqeymo uu ka geystay gobollo dhaca Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Xaqiiqda ayaa ah in tirada dadka Mareykanku ku dilay Soomaaliya ay boqolaal qof ka badanyihiin waxaa jira duqeymo badan oo shacab rayid ah lagu dilay balse aysan soo hadal qaadin hay'adaha sheegta in ay udoodaan xuquuqul insaanka.
Halkan ka akhri warbixinta Amnesty